पूर्व डीआईजी रमेश खरेल पार्टी खोल्ने तयारीमा - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २३ आश्विन २०७८, शनिबार ०३:४७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पूर्व डीआईजी रमेश खरेल राजनीतिक पार्टी खोल्ने गृहकार्यमा देखिन्छन । उनले खुला बहस गरेर जनताको अपेक्षा अनुसारको पार्टी खोल्न लागेको जानकारी दिए । “कांग्रेस कम्युनिस्टबाट केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा साथीहरुसँग दल खोल्नका लागि छलफल गरिरहेको जानकारी छ ।
खरेलले समय अभावका कारण सबै ठाउँमा जान नसके पनि सातै प्रदेशमा पुगेर जनताको धारणा बुझ्ने र त्यसपछि पार्टी दर्ता गर्ने बताए । “७७ जिल्लाका नागरिकको धारणा बुझेर हामी विचार लिन्छौं । कस्तो राजनीतिक पार्टी खोल्दा उपयुक्त हुन्छ ? के गर्दा देशमा शुसासन कायम हुन्छ भनेर हामी मुख्य–मुख्य ठाउँमा जान्छौं । जनताको कुरा बुझ्छौं,” उनले भने ।
२९ वर्ष प्रहरी सेवामा रहेर राजनीतिक दल खोल्ने सोच कसरी आयो ? “२९ वर्ष नेपाल प्रहरीमा रहेँ । उनी (नेता)हरुलाई भोगेको छु । उनीहरुसँग काम गरेको छु । उनीहरुको सोच, मनस्थती बुझेको छु । उनीहरुमा भ्रष्टाचारको लत कसरी बसेको छ भन्ने थाहा छ,” पूर्व डीआईजी खरेलले भने, “जेलमा बसेको पहिलो पुस्ताबाट पनि देशले केही पाएन । दोस्रो, तेस्रो पुस्ता क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको टेबल ठोकेका छन्, कालोमोसो दलेका छन् । टायार बाल्ने, रेलिङ भाँच्ने काम गरेका छन् । उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? उनीहरुको ग्रुमिङ नै ठिक छैन । यिनै कुराहरु देखेर दल खोल्ने सोच आयो ।”